Profaịlụ ụlọ ọrụ - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Lead Fluid Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu hiwere na Ọktoba 1999, ma na -etinyekwa aka na R&D, mmepụta na ire mgbapụta peristaltic, mgbapụta gia, mgbapụta sirinji na akụkụ metụtara mbufe mmiri. LEADFLUID nwetara ISO9001, CE, ROHS, REACH. Anyị na -esi ọnwụ na nfuli ọhụrụ wee nweta teknụzụ amachibidoro iwu. A na -eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ọrụ ugbo, bayotechnology, filtration, chemical, gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ọgwụ wdg.
Ihe anyị na -eme?
Ndị na -eduzi teknụzụ na -ebute mmiri mmiri, na -etinye aka na mgbapụta peristaltic, mgbapụta gia, mgbapụta sirinji na nfuli ODM na njikwa nkenke metụtara nyocha nyocha na mmepe, mmepụta na ire ahịa. Anyị na -amalite ụdị usoro njikwa njikwa nwere ọgụgụ isi, mgbanwe, nbipu na ndụmọdụ teknụzụ. LEADFLUID nwetara ISO9001, CE, ROHS, REACH. Anyị na -esi ọnwụ na nfuli ọhụrụ wee nweta teknụzụ amachibidoro iwu. A na -eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ọrụ ugbo, bayotechnology, filtration, chemical, gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ọgwụ wdg.
Lekwasị anya na teknụzụ bụ isi, na -achụso ịdị mma na ịdị mma. Dabere na -akwụwa aka ọtọ, ịdị n'otu na ihe ọhụrụ. Na -eduzi mmiri mmiri na -agba mbọ ịbụ ndị isi ụlọ ọrụ, na -eweta nfuli siri ike maka nnyefe.
Ntụnye bara uru
Ịchụso izu oke na imepụta ihe nlereanya
Missionlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Mee ka nnyefe nke obere mmiri ọfụma bụrụ nke ziri ezi ma dịkwa mfe.
Na -eduga ume ọhụrụ nke mmiri mmiri, mgbapụta ahụ na -eji obi emegharị.
Mgbalị ka ukwuu, obi ike, nkwukọrịta
Pụrụ iche na nfuli karịrị afọ 20
Ngwaahịa dị elu, ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịchọta.
Nkwanye ugwu maka ikike ikike ọgụgụ isi.
Gbado anya na nyocha nyocha na mmepe onwe ya
Ndị otu ọrụ aka ọrụ, mgbapụta peristaltic na sirinji mgbapụta ire ere na ndị na-ere ahịa mgbe erechara.
Enwetala asambodo ISO, CE, ROSH, ọtụtụ akwụkwọ ikike mepere emepe na akwụkwọ ikike.
Ahụmahụ ụlọ ọrụ
Ọnụọgụ ndị ọrụ
Ntụgharị kwa afọ
Ọtụtụ ndị ọrụ amatala ngwaahịa anyị nke ukwuu.
Ndị otu ahịa ọkachamara
Na -enye echiche ọkachamara na ndụmọdụ mgbapụta peristaltic, mgbapụta sirinji, nfuli odm maka ndị ahịa, iji nyere gị aka ịchọpụta ụdị na ụdị nfuli dabara maka ihe ị chọrọ.
Nka na ụzụ Surport
Ihe oru ọ bụla achọrọ, n'agbanyeghị ma ọ buru ibu ma ọ bụ obere, ndị otu teknụzụ anyị ga -enyocha ihe a chọrọ wee mee ndị ahịa ahịa feedbakc.
Controltù Njikwa Ogo
Ndị otu njikwa mma anyị ga -enyocha ngwaahịa ọ bụla, iji jide n'aka na ngwaahịa niile agaghị enwe ndepụta nsogbu na Manuel Control Quality.
Mgbe otu ahịa
Ndị otu a ga -ejikwa ahịa ahịa maka gị, ha ga -enye gị azịza zuru oke maka ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ị na -eche ihu.